please ADMINs - MYSTERY ZILLION
January 2011 edited January 2011 in Idea
ကျွန်တော် MZ ရဲ့
MP3 . MP4 . MP5 ပြုပြင်ခြင်း (Hardware + Software) အခု ဖေါ်ပြထားတဲ့ နေရာမှာ
MP345 တွေ ပြုပြင်နည်းအကြောင်းကို တင်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ ။ အချိန်ရရင်ရသလို ဆက်ပြီး တင်သွားပေးမှာပါ။
အဲဒီနေရာမှာ နေရာမှ ကျပါ့မလားလို့ ရေးပြီးမှ ထင်မိလို့ပါ ။ အကယ်လို့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင် သက်ဆိုင်သူ ADMINs များမှ သင့်လျှော်ရာနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့တင်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
GRATE Computer Centre , Myitkyina.
အခု Tutorial > Other အောက်မှာတင်ထားတာ အဆင်ပြေပါတယ် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ တစ်ခြားရောက်နေရင်လည်း ကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်ပါ့မယ် နေရာလွဲနေတာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး အဆင်ပြေတဲ့နေရာ ရွှေ့ပေးပါတယ်။